हाकिमले दिने मा,नसिक ट,र्चर र आर्थिक शो,षणका कारण ७,७०० प्रहरीले दिए रा.जीनामा – Halkhabar kura
११ भाद्र २०७७, बिहीबार २३:३१
हाकिमले दिने मा,नसिक ट,र्चर र आर्थिक शो,षणका कारण ७,७०० प्रहरीले दिए रा.जीनामा
हाकिमले दिने मा.नसिक ट,र्चर र आ,र्थिक शो,षणका कारण ७,७०० प्रहरीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । को,रोना सं,कटको समयमा प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी अग्र,पंतीमा रहेर काम गर्दै आएका छन् । यो बीचमा गएको तीन वर्षमा सात हजार सात सय प्रहरीले राजीनामा दिएको खुल्न आएको छ । अहिले प्रहरी ज.वानको तलब २० हजार ६८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ । अ!धिकांश प्रहरी कार्यालयमा आवास नभएकोले प्रहरी कोठा भाडामा लिएर बस्न बा.ध्य छन् । काठमाडौंमै पाउने १७५ रुपैयाँ रा,सनभत्ताले ग,तिलो खाजा खान पनि पु!ग्दैन ।
दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटि,नुपर्ने प्रहरीलाई सेवा सुविधामा भने राज्यबाट चरम उ,पेक्षा छ । आर्थिक शो,षण र ब,ढुवामा हुने वि,भेदबाट कु,ण्ठित भएर पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र सात हजार सात सय चार प्रहरीले रा,जीनामा दिएका छन् । यसले एकातिर राष्ट्रसेवक प्रहरीले जा,गिर छा,डेका छन् भने अर्कोतिर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको सु,रक्षा ज,नशक्ति राज्यले गु,माइरहेको छ ।
अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६ सय ८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ । आवास सुवि,धासमेत नहुने भएकाले तलबबाट गु,जारा च,लाउनै नस,क्ने अ,वस्था रहेको उनीहरूको गु!नासो छ । गत वर्ष हवल्दारबाट राजीनामा दिएका देवीबहादुर विष्टले तलबले परिवार पा,ल्नै मु,स्किल भएपछि राजीनामा दिएको बताए ।
‘राजीनामा दिने वेला मेरो तलब २२ हजार १० रुपैयाँ थियो । जब कि डे,राकै भाडा १५ हजार तिर्नु,पथ्र्यो । बा,लबच्चा पनि पढाउनुपर्‍यो । अनि प्रहरीको तलबबाट कसरी आफू र परिवार बाँ,च्नु ? सेवामा रहेका तल्लो तहका सबैको अवस्था यस्तै छ । राज्यले यसबारे सोच्नुपर्ने हो, तर खै किन सो,च्दैन,’ उनले भने ।
त्यसका अ,तिरिक्त माथिल्लो तहका हाकिमहरूबाट हुने व्यवहारले पनि तल्ला त,हका कर्मचारीलाई जा,गिर छा,ड्न थप प्रे,रित गर्ने उनको भनाइ छ । धेरै हाकिमले मा,नसिक रूपमा ट,र्चर दिने गरेको उनको अनु,भव छ । पे,न्सन अ,वधि पुग्नेबित्तिकै राजीनामा दिएर वैदे,शिक रो!जगारीमा जाने प्रहरी धेरै छन् । त्यहाँ उनीहरूले सेक्यु,रिटी गा,र्डमै पनि राम्रो तलब पाउने गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।सबैको जानकारीको सेयर गर्नुहोस !!
Previous जापानले बनायो बिश्वभरको कोरोना एकैपटक न’ष्ट गर्न सकिने ग्यास, विश्वभरबाट बधाई र शुभकामनाको ओइरो
Next तीन जना बालकलाई क’रणी गर्न लगाए, भिडियो बनाए अनि आफुले पनि बालिका ब’लात्कार गरेर यौ’न पि’पासु फ’रार भए
UNO को महासभामा डाइनोसर पसेर ‘ठीक छ ?’ भनेपछि (भिडियो)
१५ कार्तिक २०७८, सोमबार १४:२०
४ करोडको साइकल ! यस्तो छ बिशेषताहरु
८ कार्तिक २०७८, सोमबार १०:४९